ကြော်ငြါစေလို – Advertise | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » ကြော်ငြါစေလို – Advertise	24
ကြော်ငြါစေလို – Advertise
Posted by ဇီဇီ on Sep 3, 2015 in Business & Economics, Creative Writing, Ideas & Plans, Money & Finance, Myanmar Gazette | 24 comments
ကြော်ငြါ ရမယ် ….
ကြော်ငြါမရဘူးး အဲလေ မကြော်ငြါရဘူးး ဆို တဲ့ စာသားလေး ဒီ နေ့ တစ်နေကုန်ရွတ်နေရတာ။။
ဟို ကလင်ဒါ အဖွဲ့ ပေါ့။ ကြော်ငြါ အတွက် ပို့(စ) တင်ခိုင်းတာ ကို ပြေးနေရတာ ၂ ရက်ရှိပြီ။
ခုတော့ ဈေးအကြမ်းဖျင်း သိပြီ။
ဈေးမပြေါခင် ဂီဂီ ပြေါပြီး မိုးသူ ထုတ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းလေး ၂ ခု ကို အရင် ကြည့်ပြီး မဲပေးကြအူးး
ပိုကောင်းတဲ့ အိုင်ဒီယာတွေ ရှိရင် ပေးပါအူး ခင်ညာ။
ကြော်ငြါ အတွက် က တစ်မျက်နှာ လေးသောင်း ကျပ် ဝန်းကျင်ပါတဲ့ ခင်ညာ။
ထည့်ချင်တဲ့ စာမျက်နှာ (by Month) စသည်ဖြင့် ပြေါကြပါလို့။
– KAI -$100 (Ad Included)
– KZW – $50
– Kyauks – $100 (Ad Included)
– Ko Htoo Sann – $50
– RT Don – $ 50
– Sorrow – $ 50
– Taw Twin Pyaw $ 50
ဆိုတော့ တညားရဲ့ ဂလောက်ဂလောက်မှာ ပျောက်ပျောက်မသွားကြပါနဲ့အူးးး
ဘယ်သူ ဘယ်လောက် ဆိုတာလေး Update ကြပါအူးလို့။
– Ma Novi $ 40 (November)
– Ma Thel $ 40 (July)
– Ma Ma $ 40 (January)
– MT Pte Ltd $ 180 (Cover/March/August/December)
ကျန်တဲ့သူတွေက ကျန်တဲ့ လ ကို အမြန်ရွေးနိုင်မှ ရမယ်။ ဟိ
ငွေ လွှဲချင်သူများ ဧရာဝတီဘဏ် (ရန်ကုန်) (၁)
နံပတ် – ၀ဝ၀၂၂၀၂၀၁၁၂၈၉၆၀၁ သို့ လွှဲနိုင်ပါကြောင်းး
အောင် မိုးသူ says: ဒီဇိုင်းက နမူနာပါ ဆိုက်ဒ် နှစ်ခု ယှဉ်ပြထားတာပါ ခင်ဗျ။ ဒီဇိုင်းက ဆိုဒ်နှစ်ခုထဲက တစ်ခုအတည်ပြု ပြီးမှ ဆွဲမှာပါခင်ဗျ။
weiwei says: မြန်မြန်လေး လုပ်ကြပါ .. ဓါတ်ပုံနဲ့ ဒီဇိုင်းအတွက် အချိန်ပေးရအုန်းမှာမို့လို့ ..
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်ကဲ့ပါ Run နေပါတယ်။
kai says: ဒီဇင်ဘာလကို.. အခုဝယ်ထားပြီး.. မှောင်ခိုပြန်ရောင်းလို့ရလားဟင်င်င်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: မှောင်ခိုပြန်ရောင်းပြီး မြတ်တဲ့အမြတ်ကို အလှူငွေပြန်ထည့်ပေါ့။ ပိုသာကောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
@QUIL@ says: ဟုတ်ကဲ့ …
၁၀၀ လှူတဲ့ ဦးကျောက် အတွက် အောင်ဇေမင်း – ၁လစာ ထည့်ပေးပါမယ်
(ဒေတာ မစပါ- ကြိုက်တဲ့လ ရွေးပါ)
ကပ်စေးကုပ် သဂျိုင်ခီး အတွက် လည်း ၁လ ထည့်ပေးပါမယ်
ကျန်လုပ်ငန်းရှင်များ … မြန်မြန်လေး…
Ma Ma says: January လ အတွက် ကြော်ငြာထည့်ပါမယ်။
သူများဦးသွားမှာစိုးလို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
@QUIL@ says: ဟုတ်ကဲ့
ဇန်န၀ါရီ – မာမား
ဖေဖော်ဝါရီ – ? (အနစ်နာ ခံတဲ့အနေနဲ့ စံပြအဖြစ် ဖေဖျော်ရီ ယူလိုက်ပါသဂျီး …. ရက်ထပ်နှစ်မို့ ၁ရက်ပဲ နာတာပါဗျာ…ညော်)
မတ် – ?
ဧပြီ – (ဥကျောက်စ် ကို ထည့်ပေးမယ် မှန်းထားပါတယ်)
မေ – ?
ဇွန် – ?
ဇူလိုင် – အိမ်မပိုင်တဲ့ ချစ်တီး မဲသွပ် အတွက် ခဏ ချန်ထားပေးပါတယ် (အုပ်ထိန်းသူပြန်မေးအုံးမတဲ့)
သြဂုတ် – ?
စက်တင်ဘာ – ?
အောက်တိုဘာ – ?
နိုဝင်ဘာ – မနို
ဒီဇင်ဘာ – ?
ဇီဇီခင်ဇော် says: မွသဲက ဂျူလိုင်သေချာတယ်။
မွသဲ ( 17082011 ) says: မတမတေအူးမြယ်
padonmar says: ခဏလာချောင်းတုံး ဂလောက်နဲ့ တိုးတော့ ၅၀၀၀၀ ထည့်ပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း သိမ်းပေး/ရောင်းပေးခိုင်းကြဦးမှာမလား။ထူးပြီး ကြော်ငြာထည့်နေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
ဒီဇိုင်း- အောက်က ထီးနဲ့ ပုံစံကြိုက်ပါတယ်။
အောင် မိုးသူ says: အောက်က ဒီဇီုင်းက စားပွဲတင်ပါ တီဒုံ။ အပေါ်က နံရံကပ်ပါ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ငွေ လွှဲချင်သူများ
ဧရာဝတီဘဏ် (ရန်ကုန်) (၁)
ကထူးဆန်း says: account ပိုင် ရှင် က A– S—– L–
လား .. online လွှဲ မှာမို့ မှား မှာ စိုးလို့ပါ ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: I emailed to you, Bro.
ဦးကြောင်ကြီး says: ကြောင်ပုံအကြီးကြီးပါလျင် တလျှာလှူ မြည်။ ကြောင်ပိန် ကြောင်ပေါက်စ၊ ကြောင်မ မီဟုတ်နော်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရွာသမီးလေးတျောက် ပိုက်ထားတာမျိုး…။ မှက်ချပ်။ သမီးဂျီး သီးခံပါ။
may july says: ကြောင်ပုံပါရင် ၀ယ်ဝူးးးကွ ..
အောင် မိုးသူ says: ဆုတောင်းလိုက်ပါ အူးကြောင် ဘူဘောင်းတော့ရမယ်
sorrow says: ..ရုံးခန်းအပြောင်းအရွှေ့ရှိနေတာတစ်ကြောင်း ..ဖုန်းနံပါတ်တွေပြောင်းဖို့ရှိနေတာတစ်ကြောင်း ..ကြော်ငြာကိစ္စကတော့ နောက်များမှပဲပါဝင်တော့မည့်အကြောင်း …
မွသဲ ( 17082011 ) says: အောက်ကဒီဇိုင်းပိုကြိုက်ပါအိ
@QUIL@ says: မဇာယိ ဆီမှ နောက်ထပ် ၃ လ စာ ကြော်ငြာ ရရှိပါသည် (လ အတိအကျ မသတ်မှတ်ရသေးပါ)
မျက်နှာဖုံး ကြော်ငြာ (main sponsor) ပါ ပါဝင်ပါသည်..
ရောင်းစရာ နောက်ထပ် ၄လ သာ ကျန်ပါတော့သည်
@QUIL@ says: လ ကွန်ဖမ်း ပေးပါပြီ
ဒီဇင်ဘာ ပါတဲ့ ခည..